देउवा जी ! पहिला दरबार अब... ?
काठमाडौं, ४ असार । विभिन्न जालझेल, हतकण्डा र तामोतुलसी गराएर प्रचण्डलाई विस्तापित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको १० दिनमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने अलोकप्रिय निर्णय गरेर आफ्नो असंक्षम विशेषता पून उद्घाटित गरेका छन् ।
उनको यो अलोकप्रिय र अलोकतान्त्रिक निर्णयको चर्को विरोध र आलोचना भएको छ । आलोचना पनि प्रतिपक्षी लगायत अन्य दल र सामाजिक सञ्जालमा हुनु स्वभाविक नै हो । तर आफ्नै पार्टी भित्रबाट, सत्ता सहयोगी दल र जसका लागि भने जनताको भावना विपरित निर्वाचन सारियो उनीहरुले नै प्रतिपक्षीलाई जितेर चर्को विरोध र आलोचना हुनलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिदैन ।
यहाँ ठूलै गडबढी र राष्ट्रघात नभई कसैको गलत उद्देश्य र स्वार्थ पूरा नभई यस्तो चर्को विरोधका स्वरहरु सुनिने थिएनन् । यहाँ राष्ट्रघाती काम भएको छ । तर, कुन समयमा कुन राजदूतवासमा को को बसेर राष्ट्रविरुद्धका काम भए, त्यसमा को को संलग्न भए, कस कसको कुन कुन स्वार्थ पूरा भए, त्यो सत्यको पटाक्षप भने समय क्रममा हुँदै जानेछ ।
त्यसको मूल्य पनि मंहगै तिर्नुपर्ने छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अतीत र कार्यशैली हेर्ने हो भने मुलुकमा कुनै अनिष्ट तत्कालै नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । उनका पछिल्ला गतिविधि र जनविरोधी पाखाण्डी कामहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत राष्ट्रभक्त नेपाली जनताले चनाखो हुनु पर्ने समय आएको छ ।
राजपा र विदेशीसँगको देउवाको अपवित्र साँठगाँठ र देशभक्तहरुसँग उनको वैरभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । देउवाले राष्ट्र विखण्डन गर्ने र जनतालाई दुख दिने राष्ट्रदोहीहरुलाई जे भन्यो त्यही पुरयाइदिने राष्ट्रको माया गर्नेहरुलाई ठाडै दुध कार्ने गरेबाट मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जाने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
बैशाख ३१ गते नै देशैभर एकैपटक हुनुपर्ने चुनाव मधेशी मोर्चालाई देखाएर देउवाले जेठ ३१ लाई सारे । त्यो निर्वाचन परिणमबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दल र कांग्रेसको साइज निकै सानो भएपछि निर्वाचनबाट डराएर असार ९ हुँदै असार १४ गते पुर्याए । हुँदा हुँदै अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई रिझाउन भन्दै देउवाले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने गरी स्थगित गरेका छन् ।
एक त मधेशवादी दलले पहाड र मधेशको बीचको दूरी बढाउन खोजिरहेका थिए । सरकारको यो निर्णयले उनीहरुको त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ । देउवा दोस्रो चरणको निर्वाचन, संसदीय चुनाव गराउँदै संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेर जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।
यसै पनि असक्षम भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनले राजपालाई चुनावमा ल्याउनुको सट्टा उल्टै चुनाव सार्नुले देउवा सरकारको धरातल कति कमजोर छ, उनी पटक पटक किन असंक्षम भएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । मधेशवादी दलहरुमध्ये शक्तिशाली मानिएका संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक यसअघि नै चुनावी मैदानमा छन् ।
तर, भर्खरै खुलेको राजपालाई देखाएर चुनाव सारिए पनि त्यसभित्र देउवाका धेरै दाउहरु छन् । पहिलो त देउवा आफ्नो कुसीको आयु जसरी पनि बढाउन चाहन्छन् । दोस्रो मधेशमा कांग्रेसका लागि निर्वाचन अनुकुल समय नभएको त्यसलाई टार्न चाहान्छन् ।
तेस्रो राजपालाई देखाएर दक्षिणी विदेशी प्रभुलाई खुसी पारेर बिना रोकटोक सत्तामा रहन चाहान्छन् । आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय लगायत प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन संविधानले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, देउवाको विगतलाई हेर्ने हो भने उनी अनेक बहाना बाजी गर्दै चुनाव सार्ने अनि संसद्कै म्याद अर्को एक वर्ष बढाउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।
यदि देउवा यही बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका हुन् भने यो उनका लागि त आत्मघाती हुनेछ नै देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । किनकी संविधानको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको एउटा पक्षलाई संविधान सम्पूर्ण रुपमा असफल पारेर सहयोग पुर्याउने काम देउवाकै कार्यकालमा हुनेछ, खबर छलफलमा उल्लेख छ ।
हुन त देउवाको विगत हेर्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पटक पटक असक्षमको विल्ला लगाएर हटाएको, माओवादी जनयुद्ध बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको लगायत जब देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् तब देशमा अस्थिरता देखिने गरेकोले अहिले पनि देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।